Kitra – «Poule des As» : mitarika ny Cnaps Sport Itasy | NewsMada
Kitra – «Poule des As» : mitarika ny Cnaps Sport Itasy
Efa manomboka hita taratra ny ekipa mety hahazo ny laharana voalohany, eo amin’ny lalao mandroso, amin’ny «Poule des As », hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Mitarika vonjimaika ny Cnaps Sport Itasy.
Ny Cnaps Sport Itasy irery, no hany nahazo fandresena, teo amin’ny andro faharoa amin’ny lalao mandroso, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara «Poule des As», taranja baolina kitra. Fifaninanana notanterahina, omaly zoma, tany amin’ny kianja Ampasambazaha, Fianarantsoa.
Resin’ny Cnaps, tamin’ny isa mazava, 4 no ho 2, ny Elgeco Plus. Fihaonana tena nandrasan’ny maro. Vao nanomboka 3 mn ny lalao dia efa nampiditra baolina i Lalaina ho an’ny Cnaps. Tsy ela ny valin-kafatra fa nosahalain’i Bila, izany teo amin’ny minitra faha-9 ary mbola nampian’i Bela, tamin’ny lohany, indray teo amin’ny minitra faha-29. Tany amin’ny fanampim-potoana (45 mn + 1), vao nosahalain’i Lanto, izany. Tsy nijanona teo ny baolina matin’ny Cosfa, fa mbola nampian’i Foroche, indray teo amin’ny minitra faha-67 sy ny faha-73.
Saika nilentika ny Cosfa
Nisaraka ady sahala, 2 no ho 2, kosa ny Hzam Amparafaravola sy ny Cosfa. Sahirana ny miaramila, satria nitarika an’isa hatrany ny Hzam. Nanokatra ny isa, i Beson, teo amin’ny minitra faha-43. Nanasahala ny isa i Nono, teo amin’ny minitra faha-58, tamin’ny alalan’ny “coup franc” tsara petraka. Nahatafiditra baolina indray i Hasinantenaina, teo amin’ny minitra faha-70, ho an’ny Hzam. Teo dia efa niezaka nanidy trano ry zareo Amparafaravola. Tsy nanafika intsony, fa nandany fotoana fotsiny. Tsy nampihemotra na nahakivy ny Cosfa izany fa nanao izay ho afany ry zalahy. Nampitovian’i Ravelinot ny isa teo amin’ny minitra faha-84. Manana isa 6 ny Cnaps, raha 3 ny an’ny Elgeco Plus. 1 avy kosa ny an’ny Hzam sy ny Cosfa. Ho fantatra rahampitso alahady, izay hahazo ny laharana voalohany. Hidona amin’izany, ny Cnaps sy ny Cosfa ary ny Elgeco Plus sy ny Hzam.